पोखरा उद्योग वाणिज्य संघ चुनाव : प्रजु प्यानलको मत पनि अधिकारी प्यानललाई ! – Peacepokhara.com
पोखरा उद्योग वाणिज्य संघ चुनाव : प्रजु प्यानलको मत पनि अधिकारी प्यानललाई !
पोखरा, २८ भदौ।
पोखरा उद्योग वाणिज्य संघको ३२ औँ महाधिवेशनमा उम्मेदवारी दिएको रविन्द्रवहादुर प्रजु प्यानलका दुई सदस्यको उम्मेदवारी खारेज भएपछि सो समुह संकटमा परेको छ ।
प्रजू नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समूहका रामप्रसाद गौतम र शोभा गौतमको उम्मेदवारी निर्वाचन समितिले खारेज गरेपछि खुल्ला तर्फ १० सदस्य पदमा उम्मेदवारी दिएका मध्ये लोकतान्त्रिक प्यानलका ८ जना मात्र सदस्य छन् ।
वाम र लोकतान्त्रिक दुई प्यानल वनाएर उम्मेदवारी दिएकोमा अव लोकतान्त्रिक प्यानलले पनि अधिकारी प्यानलका दुई सदस्यलाई मतदान गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो । खुल्ला सदस्यको १० पदमा अनिवार्य रुपमा १० जनालाईनै मतदान गर्नुपर्दछ । यस्तो अवस्थामा लोकतान्त्रिक प्यानलमा सदस्यका उम्मेदवार ८ जनामात्र छन् । घटी वा वढीलाई मतदान गरेमा त्यस्तो मत वदर हुनेभएपछि अधिकारी नेतृत्वको प्यानलले पनि प्रजु प्यानलवाट मत पाउने भएको हो ।
‘ कि सदस्यमा कसैलाई पनि मतदान नगरि खाली छोड्न पनि सकिन्छ। एक जनालाई मत दिएपछि १० जनालाईनै अनिवार्य मतदान गर्नुपर्दछ । त्यस्तो नभएमा मत वदर हुन्छ।’ निर्वाचत समितिका सदस्य प्रकाश ज्ञवालीले भने । यसवाट अधिकारी प्यानलवाट निर्वाचन लडेका २ सदस्य भाग्मानी भएका छन् । उनीहरुलाई आफ्नो प्यानलका साथसाथै प्रतिष्पर्धी प्यानलको समेत भोट आउने भएको हो ।
कार्यकारिणी सदस्यका लागि उम्मेद्वारी दिएका रामचन्द्र गौतमबिरुद्ध समावेशी व्यवसायी समूहबाट सदस्यका उम्मेद्वार सोवित पौडेल र शोभा गौतमबिरुद्ध सदस्यका स्वतन्त्र उम्मेद्वार कृष्णप्रसाद तिवारीले उजुरी हालेका थिए । उम्मेद्वारी खारेजीमा परेका दुबै उम्मेद्वारबिरुद्ध संघको साधारण सदस्य भएको २ वर्ष नपुगेको दाबी गरिएको थियो ।
सहमति जुटाउने प्रयास आजपनि